Ministry of Health – Procurement Section
ပထမဦးစွာ user registration ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
user registration ပြုလုပ်ရာတွင် မိမိတို့ရဲ့personal mail ကိုထည့်သွင်းပေးပါ။
တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ ရယူနိုင်ရန်အတွက် company registration ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
company registration ပြုလုပ်ရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင်အသုံးပြုမည့် email ကိုထည့်သွင်းပေးပါရန်။
User Registration ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Company Registration ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် Registration ပြုလုပ်သူ ကာယကံရှင်ထံသို့ Activation email ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ email ပါ အချက်အလက်များအတိုင်း ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိပါက ဒေါက်တာနေဝင်းအောင် ဖုန်း-09956968660 ထံသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ link မှတဆင့် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Registration ပြုလုပ်နည်း
1 cutd.1.dph.21-22 15/10/2021 29/10/2021 12/11/2021
2 cutd.2.dph.21-22 15/10/2021 29/10/2021 12/11/2021
3 cptd.3.dms(2021-2022 mini) 18-10-2021 1-11-2021 19-11-2021(30/11/2021)
4 cutd.5.dph(21-22) 25/10/2021 1/11/2021 8/11/2021
5 cptd.4.dph.21-22 25/10/2021 8/11/2021 22/11/2021(25/11/2021)
6 cptd.6.dms(21-22 mini) 5/11/2021 10/11/2021 19/11/2021(30/11/2021)
7 cutd.7.COVID.21-22 11/11/2021 24/11/2021 8/12/2021
8 cutd.8.dms(2021-2022)mini 19/11/2021 3/12/2021 17/12/2021
9 cutd.9.press.dph.21-22 30/11/2021 14/12/2021 27/12/2021
10 cptd.10.dms(2021-2022)mini 3/12/2021 17/12/2021 30/12/2021
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခု အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု မတ်လ အထိ (၆)လအတွင်း ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဆေးရုံသုံး Ambulance များအား တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ Website: etender-mohs.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရူရမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါ လျှောက်လွှာပုံစံများကို တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ကုမ္ပဏီများမှ Register ပြုလုပ်၍ download ရယူနိုင် ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ-(၁)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း-၀၆၇ ၃၄၁၁၆၃၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလျှောက်လွှာနောက်ဆုံးပေးပို့ရမည့်ရက် – ( ၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ( ကြာသပတေးနေ့)
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cutd 7. dph.21-22 တင်ဒါမှ (၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ တွင် တင်ဒါပိတ်သိမ်းသည့် Covid 19 RDT test kit ဈေးနှုန်းဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်အား ကြော်ငြာခြင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cutd 7. dph.21-22 တင်ဒါမှ တင်ဒါခေါ်ယူ ထားသောဆေးပစ္စည်းများအနက် (၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်သိမ်းသည့် Covid 19 RDT test kit အား (၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ညနေ (၅:၀၀)နာရီတွင် Zoom meeting ဖြင့် ဈေးနှုန်းဖွင့်ဖောက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါ၍ Envelop A (Price) Excel file ၏ password များအား psddph2021@gmail.com သို့အား (၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နေ့လည် (၃)နာရီမှ […]
ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် Tender & Quotation များအတွက် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပေးပို့ရမည့် mail address ပြောင်းလဲခြင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်သူ့ဆေးရုံများအတွက် လိုအပ် သော ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏ e-government လုပ်ငန်း များတွင် အသုံးပြုမည့် စက်ပစ္စည်းနှင့် Software များ၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ/COVID Medical Centre များအတွက် လိုအပ်သောဆေးဝါးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ website ဖြစ်သည့် doms.gov.mm ကို Maintenance ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် – Cptd.3.dms (2021-2022)mini Cptd.6.dms(2021-2022)mini Tab Molnupiravir 200mg (Quotation) doms.gov.mm Maintenance (Quotation) တို့ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့် ဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာ (Quotation)များ ခေါ်ယူထားပြီး လိုအပ်သော […]
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏cptd.4.dph.21-22 email ထပ်မံပေးပို့ရန်ကြေညာခြင်း cptd.4.dph.21-22 ၏ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်အား (၂၅–၁၁–၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီ သို့ ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ MOHS Mail Server များ ခေတ္တရပ်နားထားပါသောကြောင့် MOHS WEBSITE: etender-mohs.com တွင် cptd.4.dph.21-22 ၏ mail address ပြောင်းလဲထားပါသဖြင့် cptd.4.dph.21-22 သို့ တင်ဒါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး Envelop A & B ပေးပို့ပြီးသော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် MOHS WEBSITE: etender-mohs.com မှတဆင့် link ပေးထားသောသက်ဆိုင်ရာ gmail မှတဆင့် ထပ်မံ ပေးပို့ပါရန်ကြေညာအပ်ပါသည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cutd.1.dph.21-22 နှင့် cutd.2.dph.21-22 တွင် တင်ဒါခေါ်ယူထားသော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား (၂၅-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် Zoom meeting ဖြင့် ဈေးနှုန်း ဖွင့်ဖောက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါ၍ Envelop A (Price) Excel file ၏ password များအား psddph2021@gmail.com သို့ cutd.1.dph.21-22 အတွက် password အား (၂၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့နံနက် (၈)နာရီမှ (၉)နာရီအတွင်း၊ cutd.2.dph.21-22 အတွက် password အား (၂၅-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့နံနက် (၉)နာရီမှ (၁၀)နာရီအတွင်း ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Zoom meeting link အား password ပေးပို့လာသည့် email မှတဆင့် ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ Password ပေးပို့ရမည့် နမူနာပုံစံ CC Co.ltd, […]
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခု အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု မတ်လ အထိ (၆)လအတွင်း ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ COVID Medical Center များနှင့် ပြည်သူ့ ဆေးရုံများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် COVID-19 ကုသရေးဆေးဝါးများ၊ Reagent နှင့် Consumable များ၊ Blood Safety ပစ္စည်းများ အား တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ Website: etender-mohs.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရူရမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါ လျှောက်လွှာပုံစံများကို တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ကုမ္ပဏီများမှ Register ပြုလုပ်၍ download ရယူနိုင် ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ-(၂)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း-၀၆၇ ၃၄၁၁၅၄၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလျှောက်လွှာနောက်ဆုံးပေးပို့ရမည့်ရက် – (၁၇-၁၂-၂၀၂၁) (သောကြာနေ့)
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ cptd.4.21-22 တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်အား ရက်တိုးမြှင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း Mail Server များကို (၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ခေတ္တရပ်နားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် MOHS WEBSITE: etender-mohs.com တွင်ကြေညာခဲ့သည့် cptd.4.21-22 တင်ဒါ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်အား (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အစား (၂၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၂:၀၀)နာရီ သို့ ရက်တိုးမြှင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် doms.gov.mm ကို Maintenance ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် အဆိုပြု စျေးနူန်းလွှာ Quotation ခေါ်ယူခြင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု၊ မတ်လအထိ (၆)လအတွင်း ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် doms.gov.mm ကို Maintenance ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်အဆိုပြု စျေးနူန်းလွှာ Quotation ခေါ်ယူလိုပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ website: etender-mohs.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြု စျေးနူန်းလွှာပုံစံများကို တင်သွင်းမည့်ကုမ္ပဏီများမှ Register ပြုလုပ်၍ download ရယူ နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ-(၂)၊ နေပြည်တော် ၊ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၁၅၄၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပြုစျေးနူန်းလွှာနောက်ဆုံးပေးပို့ရမည့်အချိန်-(၃၀-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ […]
ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်များအား ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း Mail Server များကို (၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ခေတ္တရပ်နားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် MOHS WEBSITE: etender-mohs.com တွင် ကြေညာခဲ့သည့် အောက်ဖော်ပြပါ တင်ဒါ/ Quotation များ၏ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ရက်များအားအောက်ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ရက်စွဲ၊ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ စဉ် တင်ဒါ/ Quotation မူလတင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်တင်ဒါပိတ်သိမ်းရက် ၁ cptd.3.dms (2021-2022) mini (၁၉-၁၁-၂၀၂၁) (၃၀-၁၁-၂၀၂၁) မွန်းတည့် (၁၂: ၀၀) နာရီတိတိ ၂ cptd.6.dms (2021-2022) mini (၁၉-၁၁-၂၀၂၁) (၃၀-၁၁-၂၀၂၁) မွန်းတည့် (၁၂: ၀၀) နာရီတိတိ ၃ Quotation Tablet Molnupiravir (200mg) (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) (၃၀-၁၁-၂၀၂၁) […]
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကုသရေးဦးစီးဌာန COVID-19 ရောဂါကုသရေးလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်သော Tab Molnupiravir အား ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အဆိုပြု ဈေးနှုန်းလွှာ Quotation ခေါ်ယူခြင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်း အတွက် လိုအပ်သော Tab Molnupiravir အား ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါဆေးဝါးအတွက် အဆိုပြု ဈေးနှုန်းလွှာQuotation ခေါ်ယူလိုပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ website: etender-mohs.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုဈေးနှုန်းလွှာပုံစံများကို တင်သွင်းမည့်ကုမ္ပဏီများမှ Register ပြုလုပ်၍ download ရယူ နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ-(၂)၊ နေပြည်တော် ၊ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၁၅၄၄ သို့ […]
တင်ဒါအမှတ် – cutd.7.COVID.21-22 တင်ဒါအတွက် နောက်ဆက်တွဲ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း နောက်ဆက်တွဲ(က) Covid Items တင်ဒါဖောင်ကြေး-(၅၀,၀၀၀)ကျပ် Consu21.17 to Consu 21.23 No. Commodity AU Tender Code Quantity Tender Premium Sample70.5cc AD Syringe Nos Consu 21.23 10,000,000 12,000,000 1 Box မှတ်ချက်။ ၁။ တင်ဒါအမှတ် – cutd.7.COVID.21-22 , Consu21.17 to Consu 21.23 တွင် ပါဝင်သော items များ အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် တင်ဒါဖောင်ကြေး (၅၀,၀၀၀) ကျပ် […]
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲမှ Covid 19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အတွက် လိုအပ်သော တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ တင်ဒါအမှတ် – cutd.7.COVID.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၁၁–၁၁–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် – ၂၄–၁၁–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်နှင့်အချိန်- ၈-၁၂-၂၀၂၁ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၂:၀၀) နာရီ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် – Website တွင် အနည်းဆုံး (၃)ရက်စော၍ အသိပေး ကြေညာမည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါဖောင်ကြေးပေးသွင်းရန် – မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (MD-013051) တင်ဒါဖောင်ကြေး၊ တင်ဒါအာမခံကြေး – (၁–၁၂–၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ(၈–၁၂–၂၀၂၁)ရက်နေ့ နမူနာပစ္စည်းများ အပ်နှံရမည့်ရက် (ရုံးချိန်အတွင်း)(ရုံးအမှတ်(၄)၊နေပြည်တော်နှင့် ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့)
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခု အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု မတ်လ အထိ (၆)လအတွင်း ကုသရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်၊ E-gov လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းနှင့် Software များအား တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။ တင်ဒါအမှတ် -cptd.6.dms (2020-2021)mini တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက် -(၅-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် -(၁၀-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက် -(၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက် မွန်းတည့်(၁၂:၀၀) နာရီတိတိ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -Website တွင် အနည်းဆုံး (၃)ရက်စော၍ အသိပေးကြေညာမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ-(၁)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း-၀၆၇ ၃၄၁၁၆၃၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါလျှောက်လွှာနောက်ဆုံးပေးပို့ရမည့်ရက် – (၁၉-၁၁-၂၀၂၁) ( သောကြာနေ့)
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကုသရေးဦးစီးဌာန cptd.3.dms(2021-2022) mini တင်ဒါတွင် Group Anaesthesia II မှ Operation Table ၏ Specification ပြင်ဆင်‌ကြောင်း အသိပေးခြင်း ၁။ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ cptd.3.dms(2021-2022) mini ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာတွင် Guoup Anaesthesia II မှ code no anae -17 Operation Table (၅၀) လုံး၏ Specification အား – code no anae-17(a) Operation Table with ortho accessories (10) Nos အတွက် specification နှင့် – code no anae-17(b) Operation Table […]
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ တင်ဒါကြော်ငြာပြင်ဆင်ချက် ပြင်ဆင်ချက်(၁) Tender- cutd.2.dph 2021-2022 Equine Rabies Immunoglobulin (ERIG)၏ specificationအား အောက်ပါအတိုင်းဖြည့်စွက်ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။ “minimum 200 IU/ml of immunoglobulin fragments” for RIG composition. Thus, for 5ml vial, minimum 1000 IU/5ml should be contained.
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲမှ ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးဌာနသုံးပစ္စည်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအမှတ် – cptd.4.dph.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၂၅–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် – ၈-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်နှင့်အချိန်- ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၂:၀၀) နာရီ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် – Website တွင် အနည်းဆုံး (၃)ရက်စော၍ အသိပေး ကြေညာမည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါဖောင်ကြေးပေးသွင်းရန် – မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (MD-013051) တင်ဒါဖောင်ကြေး၊ တင်ဒါအာမခံကြေး – နမူနာပစ္စည်းများ အပ်နှံရမည့်ရက် -(၁၅-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ(၂၂-၁၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့(ရုံးချိန်အတွင်း)(ရုံးအမှတ်(၄)၊နေပြည်တော်နှင့် ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန၊ရန်ကုန်မြို့)
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန၊ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲမှ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအကြိုအဆင့် HPV အခမဲ့စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော Consumable items (6) နှင့် Disposable Vaginal Speculum များဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအမှတ် – cutd.5.dph.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၂၅–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် – ၁–၁၁–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်နှင့်အချိန်– ၈–၁၁–၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၂:၀၀) နာရီ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် – Website တွင် အနည်းဆုံး (၃)ရက်စော၍ အသိပေး ကြေညာမည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါဖောင်ကြေးပေးသွင်းရန် – မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (MD-013051) တင်ဒါဖောင်ကြေး၊ တင်ဒါအာမခံကြေး – (၁–၁၁–၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ(၈–၁၁–၂၀၂၂)ရက်နေ့ နမူနာပစ္စည်းများ အပ်နှံရမည့်ရက် (ရုံးချိန်အတွင်း)(ရုံးအမှတ်(၄)၊နေပြည်တော်)
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၁)ခု အောက်တိုဘာလမှ (၂၀၂၂)ခု မတ်လ အထိ (၆)လအတွင်း ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်း (၁၈၆) မျိုးအား အုပ်စု (၂၃) ခုခွဲပြီး တင်ဒါခေါ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအမှတ် -cptd.3.dms (2021-2022)mini တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက် -(၁၈-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် -(၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက် -(၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက် မွန်းတည့်(၁၂:၀၀) နာရီတိတိ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -Website တွင် အနည်းဆုံး (၃)ရက်စော၍ အသိပေးကြေညာမည်ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါအမှတ် – cutd.2.dph.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၁၅–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် – ၂၉–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်နှင့်အချိန်– ၁၂–၁၁–၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၂:၀၀) နာရီ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် – Website တွင် အနည်းဆုံး (၃)ရက်စော၍ အသိပေး ကြေညာမည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါဖောင်ကြေးပေးသွင်းရန် – မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (MD-013051) တင်ဒါဖောင်ကြေး၊ တင်ဒါအာမခံကြေး – (၈–၁၁–၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ(၁၂–၁၁–၂၀၂၂)ရက်နေ့ နမူနာပစ္စည်းများ အပ်နှံရမည့်ရက် (ရုံးချိန်အတွင်း)(ရုံးအမှတ်(၄)၊နေပြည်တော်နှင့် ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့)
တင်ဒါအမှတ် – cutd.1.dph.21-22 တင်ဒါစတင်သည့်ရက် – ၁၅–၁၀–၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာစတင်လက်ခံမည့်ရက် – ၂၉-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းမည့်ရက်နှင့်အချိန် – ၁၂–၁၁–၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန် – Website တွင် အနည်းဆုံး (၃)ရက်စော၍ အသိပေး ကြေညာမည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါဖောင်ကြေးပေးသွင်းရန် – မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (MD-013051) တင်ဒါဖောင်ကြေး၊ တင်ဒါအာမခံကြေး – (၈-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ(၁၂-၁၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့ နမူနာပစ္စည်းများ အပ်နှံရမည့်ရက် (ရုံးချိန်အတွင်း)(ရုံးအမှတ်(၄)၊နေပြည်တော်နှင့် ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့)
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ (၁) 067-3411634
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ 067-3431449/ 09883862820